Tesla dia mahita ny fivarotany voalohany any Espana ao an-tanànan'i Barcelona | Vaovao momba ny gadget
Tesla dia mahita ny fivarotany voalohany any Espana ao an-tanànan'i Barcelona
Teslas dia fiara marani-tsaina mifandray tsy tapaka amin'ny tamba-jotra ary, araka ny fantatsika rehetra, tsy namidy tany Espana izy ireo noho ny tsy fisian'ny magazay, zavatra izay vao avy namaha azy ireo magazay "ephemeral" any an-tanànan'i Barcelona, ​​indrindra ao La Marina del Port Vell. Ity no fivarotana voalohany ahafahan'ny mpampiasa mividy fiara amin'ny fomba ofisialy any Espana miaraka amin'ny fepetra ara-dalàna sy marika rehetra, eny, mitaky paosy tsara feno vola hividianana ny iray amin'ireo maodely Tesla ireo.
Manokatra fivarotana Pop-up voalohany any Espana ny orinasa anio ary miaraka amin'izy ireo mpampiasa izay te-hividy ny iray amin'ny fiaran'izy ireo na hahafantatra fotsiny hoe inona ny Tesla, mila mijanona fotsiny mitsidika ity fivarotana ity. Amin'izao fotoana izao dia tsy raikitra ireo karazana magazay ireo ary hiova ny toerany amin'ny 12 Jolay, raha toerana hafa no hotadiavina ho an'ny fivarotana. Amin'izao fotoana izao ao amin'ny magazay dia azonao atao ny mahita ny Model S sy ny Model X ary ny ora misy azy ireo Alatsinainy ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10.00 maraina ka hatramin'ny 20.00 alina.
Raha ny fahitana azy, ankoatry ny fahitana ilay Model X vaovao, ireo mpampiasa dia ho afaka hanao fanandramana kely ihany koa amin'ireo fiara, miaraka amina masoivoho Tesla foana. Raha iray amin'ireo any Barcelona ianao amin'ireo daty ireo ary te-hanandrana ny iray amin'ireo fiara ireo, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny famandrihana fotoana any. Malagasy izay miandry anao ny ekipa Tesla. Efa misy iray ao Porto momba ity karazana magazay ity izay manova ny toerana misy azy tahaka ity any Barcelona ity. Ny tombony azo amin'ireny fivarotana ireny dia tsy misy olona ivelany, mpanelanelana na mitovy aminy miditra an-tsehatra amin'ny asa, izay azo antoka fa antoka lehibe kokoa amin'ny vidiny sy serivisy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tesla dia mahita ny fivarotany voalohany any Espana ao an-tanànan'i Barcelona
Inona ireo Spinners ary aiza no hividianako azy ireo?
Ny eropeana dia tsy hanana veto handray solosaina finday amin'ny sidina mankany Etazonia